I-WPML: Humusha iSayithi Lakho Le-WordPress Ngale Plug Yezilimi Eziningi Nezinsizakalo Zokuhumusha Okuzikhethela | Martech Zone
I-WPML: Humusha iSayithi Lakho Le-WordPress Ngale Plug ye-Multilanguage and Services Optional Translation
NgoLwesibili, Novemba 24, 2020 NgoLwesibili, Novemba 24, 2020 Douglas Karr
I-WPML iyindinganiso embonini yokwakha nokuhumusha okuqukethwe kwakho kusayithi le-WordPress elinezilimi eziningi. Njengamanje ngisebenzisa i- I-GTranslate i-plugin ivuliwe Martech Zone ukuze wenze ukuhumusha komshini olula, nobuliminingi. Lokhu kwandise ukufinyelela kwethu emhlabeni jikelele kanye nokuqhutshwa kwenjini yokusesha okuya kusayithi lami.
Sisebenza ekuthumeleni isiza seklayenti njengamanje esinabantu abaningi baseSpain. Ngenkathi i-plugin efana ne-GTranslate ingenza ukuhumusha kahle komshini, ngeke ithathe ama-nuances olimi lwesigodi ezilalelini zethu ezinkulu zaseMexico naseMelika esethemba ukufinyelela kuzo. Ngalokho, sizobe sihumusha ngokuqukethwe okuqukethwe ngomthelela omkhulu.
Ukuhumusha ngokwezifiso kudinga isixazululo esihlukile, futhi umholi kuma-plugins wokuhumusha weWordPress ngu I-WPML.
Ungahumusha Kanjani Isiza Sakho se-WordPress nge-WPML
Izici ze-WPML Faka
WordPress - Humusha yonke into isayithi lakho le-WordPress, kufaka phakathi ukuhamba, amawijethi, amakhasi, izindatshana, izinhlobo zeposi langokwezifiso, noma enye into. I-WPML futhi isekela umhleli we-Gutenberg.
Izilimi - I-WPML iza nezilimi ezingaphezu kuka-40. Ungangeza nokuhlukahluka kolimi lwakho (njengeCanada French noma iMexico Spanish) usebenzisa isihleli sezilimi seWPML.
Isakhiwo se-URL - Ungahlela okuqukethwe kolimi oluhlukile esizindeni esisodwa (kuzinkomba zolimi), kuzizinda ezingaphansi, noma ezizindeni ezihluke ngokuphelele.
Ukuhumusha Komshini - Thola ikhanda ekhanda ekuhumusheni kwakho ngokusebenzisa ukuhumusha komshini ukuze ukwazi ukonga isikhathi esithile nezindleko zensizakalo yokuhumusha ezansi nomfula.
Ukuhumusha Komsebenzisi - Guqula abasebenzisi abajwayelekile be-WordPress babe abahumushi. Abahumushi bangafinyelela kuphela emisebenzini ethile yokuhumusha abaphathi Bokuhumusha abababela yona.
Izinsiza Zokuhumusha - Xhuma ukuphathwa kokuhumusha okunamandla kweWPML nensizakalo yokuhumusha oyithandayo. Thumela kalula okuqukethwe okuhunyushiwe kusuka kuDeshibhodi Yenguqulo yeWPML. Lapho ukuhumusha kuqedile, zivela futhi kusayithi lakho, zilungele ukushicilelwa.
Ukuhumusha Kwetimu Ne-Plugin String - I-WPML ikukhulula ebunzimeni bokuhlela amafayela we-PO nokulayisha amafayela we-MO. Ungahumusha imibhalo kwamanye ama-plugins nakwizikrini ze-Admin ngqo kusuka kufayela le- Ukuhumusha Kwezintambo isikhombimsebenzisi
Ukusekelwa kwe-WooCommerce Multilanguage
Qalisa amasayithi e-commerce wezilimi eziningi nge-WooCommerce. Jabulela ukwesekwa okuphelele kwemikhiqizo elula neguquguqukayo, imikhiqizo ehlobene, ukuthengisa nokukhushulwa, nakho konke okunye okunikezwa yi-WooCommerce.
I-WPML ikukhombisa ukuthi imiphi imibhalo edinga ukuhunyushwa futhi yakhela isitolo esiphelele esihunyushiwe. Izivakashi zizothokozela inqubo yokuthengwa eyenziwe yasendaweni ngokuphelele, ngokuqala ngokufakwa kuhlu komkhiqizo, ngenqola kanye nokuphuma, ngisho nama-imeyili okuqinisekisa asendaweni.
Awudingi ukwenza noma yini ekhethekile ukudala izingqikithi ezilungele izilimi eziningi. Vele usebenzise imisebenzi ye-WordPress API bese i-WPML inakekela konke okunye.
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene naye I-WPML.
Tags: ulimi oluhlukahlukenei-multilanguage wordpressisakhiwo sezimvume zezilimi eziningiukuhumusha kwe-pluginizinsizakalo zokuhumushaUkuhumusha kwe-WooCommerceWordPressukuhumusha kwe-wordpressi-plugin yokuhumusha kwe-wordpresswpml
Ungayiphasa kanjani futhi uyigcine kanjani i-ID yokuxhumana ne-Salesforce namaFomu eGravity ne-WordPress
Amasu wezohwebo we-Multichannel E-commerce wesizini yamaholide eguqukayo